Top 5 Vòng phong thuỷ tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Vòng phong thuỷ tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Vòng phong thuỷ tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Iluphi uhlobo lwendandatho ye-feng shui oluhle? Ungakhetha kanjani indandatho ye-feng shui ukusiza ukuheha ingcebo?
Njengoba umphakathi uthuthuka, abathengi banezidingo eziphakeme zezici futhi basebenzise amanani ezinto ezibazungezile, ikakhulukazi lapha ubucwebe. Ngakho, indandatho ye-feng shui Ukuzalwa kubhekwa njengokukhethwa kokuqala kwabantu abaningi.
Ayigcini nje ngokuletha ubuhle obuyimfihlakalo kodwa futhi iletha ogqokile inhlanhla enkulu empilweni. Ngokuqondile, sizofunda okwengeziwe ngale nto engokomoya esihlokweni esilandelayo.
1 Iyini indandatho ye-feng shui?
2 Izinto okufanele zigqoke izindandatho ze-feng shui
3 Ungayikhetha kanjani indandatho ye-feng shui engcono kakhulu, elungele ikusasa
3.1 Okwendoda yegolide
3.2 I-Feng shui ikhala kubantu abanezinkuni ze-par
3.3 Indandatho ye-Feng shui yabantu abanekusasa lomlilo
3.4 Indandatho ye-Feng shui yabantu abamiselwe emhlabeni
3.5 Ngomuntu wamanzi
4 Izindandatho ezi-5 ezihamba phambili ze-feng shui okufanele uzithenge namuhla
4.1 Isongo se-Sandalwood feng shui
4.2 Indandatho ye-Feng shui ye-fox
4.3 Isongo se-Agarwood feng shui
4.4 Indandatho ye-feng shui yetshe le-aquamarine eluhlaza okwesibhakabhaka
4.5 Indandatho ye-Blood dragon feng shui
5 Izindandatho ze-Feng shui nama-taboos
5.1 Nakanjani ungagqoki ndawonye
5.2 Ungawagqoki amasongo ezandleni zombili
5.3 Gwema ukugqoka amasongo asetshenzisiwe
5.4 Khetha umbala ogqamile
Iyini indandatho ye-feng shui?
Indandatho ye-Feng shui iwumkhiqizo wobucwebe owenziwe ngezinto ezifana netshe noma ukhuni. Ngokwezinkolelo zabantu, indandatho ye-feng shui yenziwe ngemithombo yemvelo ekwazi ukumunca amandla angokomoya avela ezulwini nasemhlabeni, ngakho ine-feng shui enkulu nokubaluleka okungokomoya.
Ukugqoka isongo esandleni kungakhipha ububi, kuletha ukuthula, ingcebo nokuchuma. Ngenxa yalokho, isidingo sokuba nezindandatho ze-feng shui sikhula usuku nosuku.
Izinto okufanele zigqoke izindandatho ze-feng shui
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zamasongo e-feng shui emakethe namuhla. Ngokufanayo, emvelweni, kunezinhlobo eziningi zezincazelo ezifihliwe mayelana ne-feng shui. Ngakho-ke, kuye ngezifiso zomuntu ngamunye, noma ubani angakwazi ukugqoka lolu hlobo lwendandatho. Ngokuqondile:
Kwabadala, izingane zingagqoka ukuze zithandazele impilo enhle
Kwabasha, ingagqokwa ukuletha izinzuzo eziningi kanye nenhlanhla ezivivinyweni.
Kubantu abadala, indandatho ye-feng shui isiza ukuletha ingcebo eningi, udumo, kanye nenhlanhla.
Ungayikhetha kanjani indandatho ye-feng shui engcono kakhulu, elungele ikusasa
Okokuqala, ukukhetha isongo esifanelekile se-feng shui, udinga ukunquma ukuthi ungowasiphi isiphetho. Ukusuka lapho, uzokhetha indandatho efanelekile, esiza ukuletha inhlanhla nenhlanhla. Ngokuqondile
Yisho uKim kufanele akhethe izindandatho ze-feng shui ezinemibala ethambile njengokuthi, insundu yomhlaba, igolide lensimbi, igolide elimnyama, elimpunga noma elimhlophe elisiliva…. Leyo yimibala efanele, ekwazi ukuletha inhlanhla enkulu kanye nenhlanhla kumnikazi.
Ngesikhathi esifanayo, kubalulekile ukugcina ngokuphelele ungakhethi izindandatho ezinemibala ekhanyayo. Okubomvu, okunsomi noma okupinki. Ngenxa yokuthi le yimibala ye-taboo, ungalethi inhlanhla kubantu abanekusasa lensimbi.
I-Feng shui ikhala kubantu abanezinkuni ze-par
Labo abangabe-Wood destiny ngokuvamile bangabantu abanobungane nabaqotho. Abantu abane-par Moc bavame ukuhambisana nemibala eseduze nemvelo njenge: Gray, jade, blue.
Le mibala ayilethi nje kuphela ingcebo nenhlanhla, kodwa futhi isiza ukukhuthaza ukukhula kwebhizinisi. Ngesikhathi esifanayo, abantu abamiselwe izinkuni kufanele futhi bagweme imibala emhlophe nephuzi. Ngoba lena imibala ehambisanayo nabantu be-Wood destiny.
Indandatho ye-Feng shui yabantu abanekusasa lomlilo
Abantu abangabe-par fire bavame ukuthukuthela kalula, ukuze kuncishiswe lokho kuntula isineke, umlilo wekusasa kufanele ukhethe indandatho yetshe ye-feng shui enemibala ebomvu, ebomvana, ewolintshi, ensomi… UMenh Hoa ungqubuzana nomnyama, ompunga futhi ikakhulukazi oluhlaza okwesibhakabhaka. . . Ngakho-ke, uma ungowalesi siphetho, akufanele ukhethe imibala engenhla ukuze ugweme amacala amaningi amashwa.
Indandatho ye-Feng shui yabantu abamiselwe emhlabeni
Ezicini ezinhlanu, ukuzalwa okufanayo kuhle, futhi okuphambene akukuhle. Ngokusekelwe kulokho, ikusasa labantu bomhlaba kufanele bakhethe isongo le-feng shui elinombala wesici somlilo ngoba umlilo uzala umhlaba.
Ngokusho kochwepheshe be-feng shui, abantu abaphethe ikusasa lomhlaba kufanele bakhethe izindandatho ze-feng shui ezihambisana nombala womhlaba onjengophuzi noma onsundu … zizoletha ingcebo eningi, udumo nomsebenzi.
Abantu base-Aquarius bavame ukuba nobuntu obuqinile futhi obuhlakaniphile. Ukuze uhehe ingcebo nenhlanhla eyengeziwe, abantu balesi siphetho kufanele bakhethe izindandatho ze-feng shui eziluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi okhanyayo, omhlophe… ukuletha inhlanhla.
Izindandatho ezi-5 ezihamba phambili ze-feng shui okufanele uzithenge namuhla
I-Feng shui iyisici esihlala sikhona empilweni yethu ngayinye. Uma ubhekene nezithiyo ezithile empilweni, ungabheka amasampula Indandatho engcono kakhulu ye-feng shui okulandelayo, mhlawumbe kuzokusiza ukuxazulula leyo mithwalo nezinkathazo:
Isongo se-Sandalwood feng shui
Ibhekwa njengesitshalo “segolide” ngenxa yentengo yayo ebizayo, i-sandalwood isiphenduke umcebo wamazwe amaningi ngenxa yamagugu ewalethayo.. Ngokusho kwe-feng shui, i-sandalwood iwuhlobo lwezinkuni eziletha ukuchuma nengcebo kumnikazi.
Ezikhathini zasendulo, lolu godo lwalugcinelwe intela emakhosini kuphela. Abantu basendulo bafakazela ukuthi i-sandalwood inomphumela ophezulu kakhulu wokukhipha i-exorcism. Ngakho-ke, uma usebenzisa i-sandalwood ukwenza i-altare, i-altare lizosiza umniniyo ukuba asuse imimoya emibi, athuthukise ingcebo, futhi abe nenhlanhla. Ngaphezu kwalokho, i-humus evela kulolu khuni isetshenziselwa ukubeka impepho endishini yempepho, umnyombo wesithombe sikaBuddha, ukwenza amarosari, njll ukuze kuqinisekiswe.
Ngenxa yalokho, indandatho ye-sandalwood feng shui inhle ikakhulukazi kubantu abavame ukubhekana nokukhubazeka kokulala, imimoya emibi yakha umbhede … Ikakhulukazi kubantu bebhizinisi uma benendandatho ye-sandalwood. Uyohlala unenhlanhla futhi uphumelele ebhizinisini. Iba nenhlanhla eningi, ebushelelezi futhi evumayo empilweni.
Ngaphandle kwencazelo engokomoya, indandatho ye-sandalwood ye-feng shui nayo inomphumela omuhle kakhulu empilweni yomuntu futhi ibhekwa njengekhambi lokwelapha elingavamile. Iphunga elikhiphayo lihle kakhulu empilweni, lisiza ukuletha induduzo, ukuqapha kanye nokuthokoza. Ngaphezu kwalokho, ukugqoka njalo amasongo e-sandalwood ezandleni kuzokwenza ukuthi umzimba ushintshe igazi, uqede izifo, ukhulise impilo futhi ugcine ubuhle.
Indandatho ye-Feng shui ye-fox
Indandatho ye-Ho Ly feng shui nayo ingenye yezinto ze-feng shui ezisetshenziswa abantu abaningi namuhla ukuletha ukuthula nenjabulo emshadweni. Indandatho yempungushe ibhekwa njenge-mascot esiza “ukuvikela injabulo” futhi inciphise amabhadi ukuletha inhlanhla kumuntu oyifakile.
Ngaphandle kwalokho, le nto ye-feng shui iphinde isize ukukhuthaza ubudlelwano bomzwelo, ikhulise ukuchuma futhi imiselwe kusengaphambili umnikazi. Kulabo abangashadile, ukugqoka isongo se-feng shui Ho Ly kuzosiza ukuheha ubudlelwano obusha futhi bathole enye ingxenye yangempela yokuphila kwabo.
Ikakhulukazi, leli songo liphinde lixwayise abantu bebhizinisi ukuthi benze izinqumo ezinolwazi. Ngaphezu kwalokho, inamandla okuqinisekisa umndeni, ukugwema ukulimaza abantu abancane nokuvimbela amandla amabi azungezile.
Isongo se-Agarwood feng shui
I-agarwood iwukhuni oluyigugu oluzingelwa yonke indawo ngenxa yevelakancane kanye nenani lalo. Ngokomqondo wabantu baseMpumalanga, lolu wukhuni lwezulu, Lugqamisa zonke izimiso zemvelo yezulu nomhlaba, ludlule ekuhambeni kwesikhathi ukuze lube khona. Ukusuka lapho, letha ingokomoya elingcwele kakhulu.
Ngokusho kwe-feng shui, ukugqoka isongo se-agarwood kuzoletha inhlanhla nokuthula kumuntu ogqokile. Akusizi nje kuphela ukuxosha imimoya emibi nemimoya emibi, kodwa futhi kuvula umthombo wamandla omusha, omuhle kakhulu, ukuvikela ogqokile kumabhadi nezinhlekelele.
Ebizwa ngokuthi umcebo we-feng shui, isongo le-agarwood linamandla okuletha ingcebo nengcebo kumnikazi. Labo abenza ibhizinisi bazoba nomsebenzi ophumelelayo, ukuhamba ngomkhumbi okubushelelezi. Ngenxa yalokho, isibe yinto ethandwa kakhulu ye-feng shui namuhla.
Indandatho ye-feng shui yetshe le-aquamarine eluhlaza okwesibhakabhaka
Oda eShopee Order eTiki(Okwangempela)
I-aquamarine eluhlaza okwesibhakabhaka yatholwa ngo-300 BC futhi ibhekwa “njengetshe likankulunkulu wasolwandle”, ngenxa yamandla ayo angaqondakali. Ngokusho kwenganekwane, leli tshe laligcinwa engcebweni yezilwane ezincelisayo ezazigezwa amagagasi ogwini, ngakho lalibhekwa njengetshe eliyigugu labasolwandle, elibasiza ukuba banqobe amagagasi.
Xem Thêm Tìm hiểu về AMD hay Intel và nên mua loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Ngokufanayo namanye amatshe emvelo, i-aquamarine eluhlaza okwesibhakabhaka nayo ithatha amandla anamandla avela emvelweni, ngaleyo ndlela ilethe izinzuzo empilweni nomoya womnikazi.
Ngenxa yamandla okuthula ngaphakathi, indandatho yetshe le-aquamarine ye-feng shui iletha oyifakile ukunethezeka nokuthula kwengqondo. Isiza ekugcineni ingqondo izolile, ingaguquguquki kancane, iqaphele ukuphatha yonke into kahle.
Ngaphandle kwalokho, le nto ye-feng shui nayo ibhekwa njengophawu lothando, okusiza ukudambisa intukuthelo, ukuxazulula izingxabano, nokubopha imizwa yombhangqwana. Ngaphezu kwalokho, kusiza ekunciphiseni ukucindezeleka, ukuxosha ukukhathazeka, ukugcina umnikazi ejabule, futhi kunomphumela omuhle ekuhlanzeni ingqondo.
Indandatho ye-Blood dragon feng shui
Okuma ekugcineni emasongweni e-feng shui aphezulu ayi-5 adumile namuhla isongo sokhuni sikadrako wegazi. I-Blood dragon wood iyizinkuni eziyigugu futhi inenani elikhulu lezomnotho. Lolu khuni lunephunga elimnandi kakhulu.
I-resin yayo ibomvu njengegazi, inokunambitheka okumuncu okunamandla, kodwa lapho yomile, ifana namaparele emfudlaneni. Ngokukhethekile, uma sisebenzisa i-Flash ukuze sibheke okhunini, sizobona isenzakalo se-luminescence, okubomvu okugqamile njengegazi eligeleza ngaphakathi, okuyinto engaqondakali kakhulu.
Ngokwezinkolelo zabantu, lolu godo lunomqondo omuhle kakhulu wokuthinta nokuzwa. Banamandla okuletha amandla afihliwe kusuka emvelweni kumnikazi. Ngaphezu komphumela wokuxosha amademoni, ukuqasha udumo nengcebo, abantu basendulo baphinde badlulisela ukuthi ukukhanya okubomvu okukhishwa yile dragon blood wood nakho kusiza umnikazi ukuba agweme izinhlekelele, amashwa, futhi alethe inhlanhla.inhlanhla, ukuchuma nempumelelo.
Izindandatho ze-Feng shui nama-taboos
Njengamanje, izindandatho ze-feng shui zinemiklamo eminingi emihle, ngakho-ke abantu abasha abaningi bazigqoka ngokukhululekile nangokungakhethi. Ngokusho kochwepheshe be-feng shui ukuze ugweme izingozi ezingadingekile, kufanele wazi ama-taboos lapho ugqoke izindandatho ze-feng shui esizifingqa ngezansi:
Nakanjani ungagqoki ndawonye
Isongo se-feng shui siyinto “engokomoya” kakhulu. Uma usungumnikazi wayo, iyohlale ikulethela inhlanhla. Ngakho-ke, kungcono kakhulu ukungawagqoki noma uvumele abanye ukuthi bawathinte ukuze ugweme ukulahlekelwa lobo bungcwele.
Ungawagqoki amasongo ezandleni zombili
Abantu abaningi banamasongo amaningi e-feng shui, ngakho bawagqoka wonke kanyekanye ezandleni zombili. Kodwa-ke, lokhu akuvumelekile ngoba ama-cuffs angu-8 kuphela agqokwa ezandleni zombili. Uma ugqoke isongo se-feng shui, kufanele sikhumbule ukugqoka into eyodwa kuphela. Uma kugqokwe kakhulu ezandleni zombili, kuzothinta ingcebo yomnikazi.
Gwema ukugqoka amasongo asetshenzisiwe
Akunconywa ukugqoka isongo se-feng shui esetshenzisiwe ngoba lokhu kuyinto engokomoya, inamandla okuqongelela amandla, uma othile ewasebenzisile, akufanele uyisebenzise futhi. Noma kufanele ucele inkosi ye-feng shui ukuthi isuse umoya omubi oshiywe ngumuntu wangaphambilini.
Khetha umbala ogqamile
Isayensi ifakazele ukuthi izindandatho ze-feng shui ezenziwe ngamatshe emvelo noma ngokhuni zingaletha izinzuzo eziningi kumnikazi wazo. Ihlelo ngalinye lizoba nombala walo ofanayo. Ngakho-ke, lapho ukhetha indandatho ye-feng shui, kufanele ukhethe umbala ofanele ohambisana nesiphetho sakho.
Impela ngalesi sihloko ubuye waqonda okwengeziwe indandatho ye-feng shui ngolwazi olufanele. Ngethemba, ukwabelana okungenhla kuzoba usizo kuwe ekutholeni isongo esifanelekile. Uma usazibuza ukuthi iyiphi ongakhetha kuzo eziphakamisweni ezi-5 ezingenhla, ungabheka ku- Indandatho ye-Ho Ly feng shui.
Lona umkhiqizo ongokomoya othandwa kakhulu futhi unamandla okuheha inhlanhla, inhlanhla nempilo kumnikazi.
(Kuvakashelwe izikhathi ezingama-997, ukuvakashelwa okungu-5 namuhla)
Cách làm bánh tráng trộn Tây Ninh đơn giản nhất tại nhà | Muasalebang